Ibhetri yeelaptops zikaApple, eyona ihambelana kakhulu neentshaba zayo | Ndisuka mac
Ibhetri yeelaptops zeApple, eyona ihambelana kakhulu neentshaba zayo
Kubasebenzisi abaninzi, elinye lamanqaku aphambili xa ukhetha ilaptop bubomi bebhetri. Xa sivavanya enye ilaptop okanye enye, kuya kufuneka sithathele ingqalelo ixesha elinikezelwa ngumenzi. Kodwa isigqibo sethu sokuthenga asifanele sithathele ingqalelo kuphela idatha yomenzi, kuba kunqabile ukuba ihlangane nenyani. Iphengokuqinisekileyo iziphumo ezibonelelweyo zikwimeko ezifanelekileyo: ubushushu, imfuno encinci kwiprosesa, ukusetyenziswa okuncinci kweefeni, njl.. Kweli nqaku siza kubona isifundo esenziwe kwiphephancwadi Yeyiphi? apho kuthelekiswa iilaptops ezininzi ezifanelekileyo.
Kwisifundo siza kubona, njani Iilaptops ezithembise ukuzimela okugqwesileyo azifikanga kwi-50% yokuzimela kwethiyori. Kunoko, Uhlalutyo lweeMacs ezininzi lwenza into ebithenjisiwe, nkqu kubonakala ngathi ligqithile kwezinye iimvavanyo. Abasebenzisi beMac akufuneki bothuswe sisifundo, njengoko ukusebenza kwesoftware yeMacOS kukhokelela ekusebenziseni ibhetri. Umzekelo wamaxesha la fan iqhagamshelwe kwi-PC okanye kwi-Mac.
Kodwa masiye kuvavanyo. Iikhompyuter ezisetyenzisiweyo zazivela kwimveliso: iAcer, iApple, iAsus, iDell, iHP, iLenovo, iToshiba. Kodwa imodeli eyahlukileyo yohlobo ngalunye ayisetyenziswanga, ukuze ungalugqwethi uvavanyo. Ubuncinci iikhompyuter ezintathu zohlobo ngalunye zithathe inxaxheba.
Ubuncinane kusetyenziswa imijikelezo emithathu yokutshaja, oko kukuthi, ukusuka xa ibhetri ikwi-100% de izixhobo zicinywe. Kwiimvavanyo, i-Intanethi yatyhilwa yiWifi. Kwezinye iimvavanyo kwadlalwa imovie.
Iziphumo bezizilandelayo (Nangona sele sikuxelela ukuba asiwazi amaqela athatha inxaxheba):
Lenovo: Ulwazi oluqikelelweyo lomenzi: iiyure ezi-5. Iziphumo zovavanyo: iiyure ezi-2 kunye nemizuzu esi-7.
I-HP: Ulwazi oluqikelelweyo lomenzi: iiyure ezili-9. Iziphumo zovavanyo: iiyure ezi-4 kunye nemizuzu engama-25.
UDell: Ulwazi oluqikelelweyo lomenzi: iiyure ezili-7. Iziphumo zovavanyo: iiyure ezi-3 kunye nemizuzu engama-58.
I-Acer: Ulwazi oluqikelelweyo lomenzi: iiyure ezili-6. Iziphumo zovavanyo: iiyure ezi-2 kunye nemizuzu engama-58.
Apple: Ulwazi oluqikelelweyo lomenzi: iiyure ezili-10. Iziphumo zovavanyo: iiyure ezili-12.
Ebuzwa kubavelisi, owokuqala ukuphendula yayinguye Dell, ebonakalise ukuba umsebenzisi ngamnye usebenzisa okwahlukileyo kwaye kunzima ukuqikelela ukusetyenziswa komndilili. Ngayiphi na imeko, iinzame zika-Apple zokwenza ukuba inkqubo yakhe yokusebenza isebenze ngakumbi kwaye ngenxa yoko ukusetyenziswa kwezixhobo kungancitshiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ibhetri yeelaptops zeApple, eyona ihambelana kakhulu neentshaba zayo
Imidlalo yeqhinga emi-3 ye-Mac apho uya kuba yinkokeli